बूढाबूढी र हीरा - शखदा साहित्य
बूढाबूढी र हीरा
5:45 AM बालकथा, बालसाहित्य
धेरै वर्षगाडिको कुरो हो, पूर्वाञ्चलको एउटा हिमाली क्षेत्रमा सामदुङ नाम गरेको एउटा गाउँ थियो । त्यस गाउँका मानिसहरू असल थिएनन् । त्यस गाउँमा कोही परदेशी घुम्दै आए भने उसको सामान खोसिदिने, उसलाई दुःख दिने गर्दथे । धनसम्पत्ति धेरै ल्याएका परदेशी भए खूब चाकर गरी बस्नलाई वास दिन्थे । अनि भोलिपल्ट उसका मालसामान खोसेर, चुटेर त्यहाँबाट धपाउँथे । यसरी त्यस गाउँका मानिसहरूको गुजारा चल्दथ्यो ।
एक दिनको कुरा हो । भगवान् शिवजी हिमाली प्रदेशको यात्राको क्रममा त्यहाँ आइपुग्नुभयो । यसो गाउँतिर हर्नुभयो, उहाँलाई त्यो गाउँ रमाइलो नै होला भन्ने लाग्यो । उहाँ गाउँभित्र पस्नुभयो । शिवजी जोगीको भेषमा आउनुभएको हुनाले सबै गाउँलेहरूले नियालेर हेर्न थाले । शिवजीले प्रत्येक घरमा वास बस्न माग्नुभयो तर कसैले पनि वास बस्न दिएनन् ।
शिवजीको साथमा धनसम्पत्ति नभएको हुनाले ती गाउँलेहरू टक्टकिन थाले । शिवजीले त्यस गाउँका चालचलन थाहा पाइहाल्नुभयो । शिवजी गाउँबाट बाहिर निस्कनुभयो । यसो डाँडामाथि आँखा लगाउनुभयो । त्यहाँ एउटा झुपडी घर थियो । शिवजीले त्यतैतिर पाइला बढाउनुभयो ।
त्यस झुपडीमा बूढा र बूढी बस्दथे । ती बूढा-बूढी गाउँदेखि अलग्ग छुट्टएर बसेका थिए । किनभने ती बूढा-बूढीलाई गाउँलेहरूको खराब बानी मन पर्दैनथ्यो । ती गाउँलेहरू पापी र अधर्मी थिए भने बूढा-बूढी धर्मात्मा र दयालु थिए । साँझ परिसकेको थियो ।
शिवजीले दैलामा आएर भन्नुभयो "यहाँ वास पाइन्छ कि -" बूढाले नम्र भएर भने- "पाइन्छ नि, बस्नोस् न ।" बूढीले पनि थपिन्-"हामीसँग खानेकुरा केही छैन । हामी साह्रै गरिब छौँ । खाने भए अलिकति ढिँडो दिन्छौँ ।"
"भो पर्दैन, मेरो नखाने व्रत छ । यहीँ ओछ्यान लगाएर सुत्छु ।" यति भनेर शिवजी ओछ्यानमा पल्टनुभयो ।
बिहान उज्यालो भयो । बूढाबूढीले यसो गाउँतिर आँखा लगाए । गाउँ जम्मै बगाएर लगेको थियो । त्यहाँ घरहरूको नामनिसाना थिएन । मानिसहरू ज्यान जोगाउन पाखातिर बसेका थिए । बूढा-बूढी छक्क परे । तिनीहरूले आत्तिएर शिवजीलाई उठाए । शिवजीले पनि तिनीहरू अचम्ममा परेको थाहा पाइहाल्नुभयो र भन्नुभयो-
ती गाउँलेहरू असाध्यै पापी थिए । तिनीहरूको पापको घडा भरिएको थियो । त्यसैले राती हिमताल फुटेर तिनीहरूको धन-सम्पत्ति बगाएर लग्यो तर तिमीहरू धर्मात्मा रहेछौ । त्यसैले तिमीहरूलाई केही भएन ।" परदेशीको कुरा सुनेर उनीहरूलाई त्यो परदेशी कुनै दिव्य पुरुष हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । उनीहरू डराए । उनीहरूले आफूले केही गल्ती गरेका छौँ भने माफ गरिदिनोस् भने । शिवजीले उनीहरूलाई "नडराऊ" भन्नुभयो । अनि उनीहरूको दुःख देखेर झोलाबाट हीराको टुक्रा झिकेर दिनुभयो र त्यहाँबाट बाटो लाग्नुभयो ।
गाउँ पनि जम्मै बगाएर लगेको हुनाले ती बूढा-बूढीले केही खानेकुरा पनि खान पाएनन् । यसरी भोकभोकै मर्नुभन्दा हीरा बेच्ने अनि बसाइ पनि र्सर्ने उनीहरूले विचार गरे । हीरा बोकेर बूढाबूढी कोसी नदीको किनारैकिनार तर्राई र्झन थाले । बाटामा रात परेको हुनाले एउटा पाटीमा वास बसे । त्यस पाटीमा अरू बटुवाहरू पनि थिए । बूढाबूढीले कनिकाको खोले पकाई खाए । सुत्ने बेलामा बूढीले बूढालाई "हीरा कहाँ राखेका छौ -" भनी सोधिन् । बूढाले पनि ँपोकोमा राखेको छुँ भने । ती बूढाबूढी सोझा थिए । अरूले चोरिदेलान् भन्ने उनीहरूलाई लागेन । नजिकै बसेको एउटा छट्टू वाले यो कुरा सुनिरहेको थियो । उसले राती नै हीरा चोरिदियो । बूढाबूढीले बिहान उठेर पोको खोलेर हेरे । त्यहाँ हीरा नदेख्ता उनीहरूको होसहवास नै उड्यो । त्यसपछि कसले हीरा चोर्‍यो भनी हल्लाखल्ला गर्न थाले । सबै बटुवाले आफूले चोरेको छैन भनी पोको खोलेर देखाए । त्यो छट्टु बटुवाले चाहिँ आफूलाई चोरको बात लाग्ला भनी अघि चोरेको हीरा नदीतिर फ्याँकिदियो ।
हीरा नभटेपछि बूढाबूढी साह्रै दुःखी भए । लाखौँ रुपियाँको हीरा हराएपछि उनीहरू भोक न प्यास भएर त्यही पाटीमा बस्न थाले । त्यहाँ नजिकै एउटा गाउँ थियो । त्यस गाउँका मानिसहरू माछा मारेर जीविका चलाउँथे । बूढाबूढीले पनि त्यसै गर्ने विचार गरे । बूढा दिनभरि माछा मारेर ल्याउँथे । बूढी त्यो माछा सिकुटी बनाई बेच्दथी । यसरी उनीहरूको गुजारा हुनथाल्यो ।
एक दिन बूढाको जालमा अनौठो माछो पर्‍यो । त्यो माछो असाध्यै ठूलो थियो । बूढाले त्यो माछो घरमा ल्याए । त्यो माछाभित्र के रहेछ भनेर बूढाबूढीले चिरेर हेरे । त्यो माछाभित्र बूढाबूढीले आफ्नै हराएको हीरा भेट्टाए ।
हराएको हीरा भटेपछि बूढाबूढी दङदास परे । उनीहरूले आफ्ना दुःखका दिनहरू अब चाँडै सकिने कल्पना गर्न थाले । त्यसै समयमा त्यहाँ एउटा ठूलो व्यापारी आइपुग्यो । बूढाबूढीले पनि आफ्नो हराएको हीरा पुःन भेटिएको कथा त्यो व्यापारीलाई सुनाए । त्यो व्यापारी असाध्यै धनी थियो र दयालु पनि थियो । उसले त्यो हीरा किनिदियो र बूढाबूढीलाई प्रशस्त धनसम्पत्ति दियो । त्यो धनसम्पत्तिले बूढाबूढीले आफूलाई खान पुग्नेजति जग्गाजमिन किने । बाँकी रहेको सम्पत्तिले पाटी-पौवाहरू बनाइदिएर धर्म कमाए ।
Shamim Anwar said...
Wow amazing story...loved it so much, is this your original story? I mean written by you...as I am looking for some story..
Thank you Shamim bhai, its my original story. its my own creativity .
Sharmila Jee, thank you since your stories are great would you be interested writing in script if so please let me know then I can explain. I can be cotacted on catmandufilms(a)gmail.com
शासीम जी कस्तो खालको स्क्रीप्ट लेख्ने हो खुलाएर लेखुनु होला । म प्रयास गर्नेछ । sakhada4@yahoo.com मा पठाउनु होला